Cajiibka: Farogelinta Macluumaadka Webka - Codsi Fiican oo loogu talagalay Dareemayaasha Dijital ah
Qiimeenta digital'ka ah waxay badanaa ku xayeysiiyaan magacooda, alaabooyinka ama adeegyada iyaga oo adeegsanaya warbaahinta bulshada, emails, iyo
goobaha kale. Waxay isticmaalaan teknoolojiyada digital-ka ah sida xayeesiinta, suuq-geynta emailka, iyo suuq-geynta telefoonka si ay ula kulmaan macaamiisha cusub adduunka oo idil. Badeeco dijitaal ah oo badanaa waxay qabataa shaqooyinkeeda internetka waxayna qabataa dhowr marxaladood xog-is-dhaafsi mashaariic maalinle ah. Shabakadda Macluumaadka Webka waxay ka caawisaa suuqyadeyaal kumbuyuutarro ah inay kor u qaadaan oo ay suuqgooda ku iibsadaan. Waxaa intaa dheer, qalabkani wuxuu ka caawiyaa abuurista raadad dheeraad ah internetka.
Dhamaan dadka ganacsatada ah:
Diiwaanka digital iyo duubista webka waxay bedeleen jidadka ganacsiga, iyo noocyada waxay kor u qaadaan alaabta iyo adeegyada. Iyadoo la adeegsanayo Data Extractor, waxaad kaliya maaha bartilmaameed macaamiisha tiro badan laakiin sidoo kale waxay ku daraan qorshooyinka suuq-gareeynta iyo istaraatiijiyada. Waxaad xoqin kartaa bogagga intarneetka ah ee saacad ah markaad rabto, sidaas awgeedna kor u qaado ganacsigaaga.
Waa ammaan in la xuso in macluumaadka Extractor-ka ee Webku yahay adeegga si sahlan loo isticmaalo. Waxay kaa caawineysaa inaad hagaajiso farsamooyinka suuq-geynta sayniska sida SEO, SEM, suuq-geynta suuq-geynta, maareynta farsamada, suuq-geynta saamileyda, suuq-geynta xogta, iyo muujinta xayeysiinta. Macluumaadka Shabakada Webka ayaa sheeganaya in ay malaayiin ka sameystaan ​​bogagga intaa ka fog, falanqeeyayaasha xogta badanaaba waxay isticmaalaan qalabkan si ay u soo saaraan macluumaadka laga helo bogagga internetka ee ganacsiga iyo e-ganacsiga. Waxaad xoqin kartaa bogga oo dhan ama qayb ka mid ah adeeggan oo aad ku dhameeysid hawlaha suuq-geynta ee dijital ah si habboon.
Waad ku xiri kartaa shabakadda macluumaadka ee shabakadda, waxaad xoqin kartaa bogagga shabakadaha bulshada sida YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, iyo Google+ si sahlan. Waxaad sidoo kale xogta ku xoqin kartaa ka qaybgalayaasha doodaha, dib u eegida bogagga iyo wargeysyada sida BBC iyo CNN. Isticmaalka qalabka caadiga ah ee wax lagu qoro, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad xogta ka soo qaadato CNN iyo BBC; laakiin Data Extractor Webka wuxuu qabanayaa hawlo badan waxayna ururin karaan, qabanqaabin karaan, oo ka soo saari karaan macluumaadka goobahaas iyada oo loo eegayo shuruudahaaga.
Qaybaha kala duwan:
Mid ka mid ah sifooyinka ugu kala duwan ee Shabakadda Macluumaadka Webka waa in laga helaa noocyo kala duwan: Asturnaanta, Version Free,. Nidaamka bilaashka ah wuxuu ku habboon yahay shaqaalaha xorta ah, shirkadaha yar yar, iyo kuwa aan barnaamijka ahayn. Qaybaha muhiimka ah iyo xirfadlayaasha waxay u fiican yihiin ganacsatada, suuqa kala iibsadaha, iyo barnaamijyadaba. Iyadoo la adeegsanayo Data Extractor, waxaad dib u soo ceshan kartaa macluumaadka iyo sharaxaadda alaabta iyo sawirrada ku habboon.
Looma baahna dayactir loo baahan yahay:
Si ka duwan noocyada kale ee caadiga ah waraaqaha xogta iyo shabakadaha webka, Macmiilka Web. Sidoo kale uma baahnid in aad leedahay xirfad aad u codsanaya inaad isticmaasho qalabkan. Haddii aadan aqoonin Python, C ++, BeautifulSoup, iyo Ruby, waxaad wali ka faa'iideysan kartaa Data Extractor Webka waxayna ku raaxeysan kartaa muuqaalada asaasiga ah. Qalabkani kaliya kuma xoqin macluumaadka adiga laakiin sidoo kale wuxuu abaabulaa iyada oo ku saleysan ereyada gaaban iyo ereyo muhiim ah oo dheer. Waxaa intaa dheer, waxay si toos ah u daabacdaa content-kaaga internetka oo waxay ku hagaajisaa dhammaan khaladaadka yar ee xogtaada, inaad badbaadiso waqtigaaga iyo tamartaada.
Xaqiijinta cinwaanka iyo ilaalinta spam:
Shabakadda Macluumaadka Webka ayaa ansixinaya cinwaanada emailka, adiga oo ku siinaya liis dhamaystiran oo macaamiishaada ah qaab. Intaas waxaa sii dheer, adeeggani wuxuu ka difaacayaa spam wuxuuna ka hortagaa kumbuyuutarrada iyo spameriyeyaasha in ay helaan marinkaaga internetka Source .